Archive du 20181204
Marc Ravalomanana Hiaro sy hanasoa ny Malagasy
Fanompoam-pivavahana miaraka amin'ny Kandida Marc Ravalomanana laharana 25 ao amin'ny foiben-toerana na QG Bel’Air
Manandafy Rakotonirina sy ny MFM Ravalomanana no vahaolan’ny firenentsika
Tonga teny amin'ny foiben-toeran’ny K25 etsy Bel'air ny filohan’ny MFM, Manandafy Rakotonirina sy ireo mpiara-dia taminy omaly alatsinainy 03 desambra ary noraisin’ny kandida Marc Ravalomanana tam-pitiavana.
Tanora TIM Moramanga Manainga ny rehetra hampandany ny kandida n° 25
Miantso ny tanora sy ireo sokajin’olona tsy an-kanavaka rehetra eto amin’ny distrikan’i Moramanga RN 2 vonona hiara-dia amin’ny K 25 ny tanora TIM ao
Filohan’ny CENI “Aoka tsy hivarotra safidy noho ny variraiventy isika”
Nanao antso avo ho an’ireo kandida roa mpifaninana amin’ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa sy ny vahoaka Malagasy ny CENI tamin’ny alalan’ny filohany Hery Rakotomanana omaly altsinainy 3 desambra.
Ny Rado Rafalimanana Hampandany an’i Dada ihany koa
Hanohana tsy misy fepetra ny kandida laharana faha-25 Marc Ravalomanana ny kandida Ny Rado Rafalimanana laharana faha-11 sy ny Fikambanana Ny Fanahy No Maha-Olona tarihiny, araka ny fanambarana goavana natao tetsy amin’ny Hotely Colbert Antaninarenina omaly.
Fampandaniana an-dRavalo any Atsimo Ho avy masika ry Namana Zores
Hampandany an'i Dada miaraka amin'ireo fikambanana mivondrona ao amin'ny club Toliho, izay ahitana fikambanana maro any amin’iny ilany Atsimon’ny Nosy iny, toy ny CCT (Colléctif de Cadre Tuléar), ny IMMR (Isika Miaraka Mandresy Ravalomanana, VA.TO.MA.MY (Vahoaka Tokana Malagasy Mivoatra),…
Firaisankinan’ireo kandida Nanome tso-drano ireo nisintaka
Namoaka fanambarana iombonana tetsy Tsaralalana omaly ry zareo avy eo anivon’ilay firaisankinan’ireo kandida ho filoham-pirenena nisafidy ny tsy hanohana na iza na iza amin’ny
Fihodinana faharoa ee…
Fihodinana faharoa indray zao no malaza Propagandy miaraka amin'ireo artista fanta-daza Fitetezam-paritra, kabary lavareny Tsy adinoina ihany koa ireo fanampiana sesehena.
Holafitry ny mpisolovava Mitaky ny fampiharana ny lalàna
Taorian`ilay raharaha fikasihan-tanana tamina mpisolovava iray tetsy Antanimena ny sabotsy lasa teo dia nanamafy hatrany ny holafitry ny mpisolovava fa tsy manaiky ary manameloka ny herisetra nahazo ny naman`izy ireo.
Centre sembana mijoro Ambohibao Morondava Mampianatra ireo sembana hahay mamaky teny sy manoratra
Tsy vesatry ny fiarahamonina velively ny olona manana fahasembanana fa afaka mandray anjara amin’ny fampandehanana ny fiainana andavanandro ihany koa, indrindra fa ny fampandrosoana ny firenena.
Fidarohana mpisolovava teny Antanimena Hiakatra fampanoavana anio ny raharaha
Omaly hariva no nataon’ny zandary fanadihadiana teny amin’ny hopitaly nisy azy ilay tovolahy iray nidaroka mpisolovava teny Antanimena mba hihanoana ny filazany ny zava-nitranga;
Fiangonana FLM Manameloka ny fampiadiana amin’ny Kristianina
Manoloana ny fihantsiana sy ny fampielezana vaovao tsy marina atao amin’ny haino aman-jery hanaratsiana ny FLM momba ny tany eny Androhibe hanorenana fiangonana sy tetikasa sosialy maro dia nanampy ny fanazavana efa nataony ny avy eo anivon’ny fiangonana loteranina malagasy.
Jeux Corporatifs ASIEF/3Fb fahasalamana Hotanterahina amin’ny sabotsy sy alahady izao
Nambaran’ny filoha nasionalin’ny ASIEF « Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires », Andrianarison Jean Aimé Botosera « John Love »,
CCOI Hand-ball Nanao pao-droa ny Reonioney
Nikatona tamin’ny sabotsy 1 desambra teo ny ridaon’ny fifaninanana Hand-ball niadiana ny ho tompondakan’ny Ranomasimbe Indiana ho an’ireo ekipa tompondaka lahy sy vavy amin’ny firenena 7 mpikambana.
Samy te hanangana
Kodiaran-tsarety ny fiainana ary tsy misy mahalala izay haloaky ny ampitso.
Taksibe mihazo an’Ambohitrimanjaka Arahi-maso akaiky ny fomba fiasany
Mijanona ho 500 Ar ihany aloha hatreto ny saran-dalana mampitohy an’i 67 ha amin’Ambohitrimanjaka na dia nikasa ny hampiakatra izany ho 800 Ar aza ireo mpitatitra nanomboka ny faran’ny herinandro teo.
Materinité Befelatanana Nisitraka fanafody sy fampitaovana avy amin`ny JICA
Mba hahafahana mampihena ny taham-pahafatesan`ny reny sy ny zaza eo am-piterana dia nanolotra fanafody sy fampitaovana ho an’ny Maternité Befelatanana, ny masoivohon’i Japon eto amintsika.
Toekarena sy fandraharahana Nifanakalo hevitra tamin’ny GEM i Marc Ravalomanana
Vahiny nasain’ny fiombonan’ny orinasa eto Madagasikara (GEM) manokana ny Kandida Ravalomanana hiresaka momba ny fandraharahana eto Madagasikara.
DAROKA TENY ANTANIMENA
Miharatsy ny toe-pahasalaman’i Me Aliarivelo etsy amin’ny Hjra rehefa nanomboka nandoa matetika izy omaly.
Nifamadika tanteraka ny sanjila eo amin’ny kandida ho filoham-pirenena, Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana.
Fanajana fitsipika fanariana fako Olona miisa 151 no hiandry ireo bakan-jaoridira
Ho fandrindrana sy ho fitandroana ny fahadiovana tsy hiparitahan’ny loto manodidina ny dabam-bako eto amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) dia olona miisa 151 manomboka izao no apetraky ny kaominina hiandry ireny dabam-pako iombonana ireny.
Fanangonana fako eto Antananarivo Tsy mazavazava ny fiasan’ny RF2 sy ny fokontany sasany
Mbola tohin’ilay fitantanana fako mamofompofona politika mampifanolana ny CUA amin’ny SAMVA ve sa zavatra hafa ?
Rano tapaka lava eny Itaosy Efa mba nahitana mangirana kely tao anatin’ny telo andro
Tena tsy nihemotra tokoa ireo mponin’Itaosy ny faran’ny herinandro teo fa nanatanteraka hetsika fanairana teny amin’ny siniben-drano teny Ambohidrapeto na dia tsy nilanja sorabaventy nitety tanàna aza ho fitandroana ny filaminana.